“Diniho aho, Jehovah ô, ka fantaro” Sal. 26:2
Ny Tompo ao amin’ny fampanan-tenany dia mitondra ny olombelona eo amin’izay ahafahany mitsapa ny hery ara-moralin’izy ireo ary haneho ny antony manosika azy ireo hanao zavatra, mba hahafahan’izy ireo mampitombo izay tsara ao amin’ny tenany sy hanaisotra kosa izay ratsy. Maniry ny mpanompony mba hifankazatra amin’ny foto-pisainana ara-môraly mande ho azy ao am-pon’izy ireo Andriamanitra. Mba hahatongavana amin’izany , dia matetika Izy no mamela ny afon’ny fitsapana mba hamely azy ireo ka hahatonga azy ho voadio.
Raha toa ka zara raha hitan’Andriamanitra isika, dia tena manahirana tokoa ny toerana misy antsika.Andriamanitra no mpamotsy sy mpanadio ny fanahy; ao amin’ny hafanan’ny fandrendrehana, dia voasaraka mandrakizay ny tain-drendrika hiala amin’ny tena volafotsy sy volamenan’ny toetra kristianina. Mijery ny fitsapana i Jesosy . Fatany izay ilaina mba hanadiovana ilay metaly sarobidy ka hahafahany mitaratra ny fanjopiakan’ny fitiavana avy any ambony.
Mananatra anareo aho mba “Diniho ny tenanareo , na mitoetra amin’ny finoana hianareo, na tsia” 2 Kôr. 13:5. Ny fitehirizana ny hafanana sy ny fahadiovan’ny fitiavana kristianina dia mitaky fanampiana mitohi’ny fahasoavan’i Kristy (...)
Amin’izao vanim-potoan’ny fahoriana sy ny fitsapana izao dia ilaintsika ny fanohanana sy ny fampiononana izay azontsika tsoahina avy amin’ny foto-kevitra marina, avy amin’ny faharesena-dahatra ara-pivavahana tsy miova, avy amin’ny toky mambo ny fitiavan’i Kristy , ary avy amin’ny haren’ny fanandraman’ny zavatra avy any ambony. Afaka ny hahatratra ny fahafenoan’ny lehilahy sy vehivavy ao amin’ni Kristy Jesosy vokatry ny fitomboana mitohy ao amin’ny fahasoavana irery ihany.
Tsy amin’ny fahafahana amin’ny fitsapana, fa ao afovoan’izany, no ivelaran’ny toetra kristianina. Ny fifampikasohana amin’ny fanoherana sy ny fanosehana dia mitarika ireo mpanara-dia an’i Kristy ho amin’ny fiambenana bebe kokoa ho amin’ilay Mpanampy Tsitoha. Ny fitsapana henjana iaretana amin’ny fahasoavan’Andriamanitra dia miteraka faharetana , fahamailoana, faherezana, ary fahatokiana lalina mitoetra ao amin’Andriamanitra. Ny fandresena miezinezin’ny finoana kristianina no ahafahan’ireo mpanaraka izany hiaritra sy hatanjaka; hilefitra, ary avy eo handresy; ho faty mandrakariva, ary ho velona indray; hilanja ny hazo fijaliana, ary avy eo hahazo ny diademan’ny voninahitra.